အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 04/10/08
ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့ အကျိုးငှာ လောကအား “အချစ်” ဆိုသောအရာဖြင့် ကြိမ်စာတိုက်ခဲ့ လေသည်။
လောကထဲကို ခြေစုံပစ် ၀င်လိုက်ပါ”
ကျွန်တော်နှင့်သူမ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း မရသေးသောကြောင့် အသည်း အသန်လိုက်ရှာနေကြပါတယ်..။
“ ဒီဆိုင်လည်း အလာကားပဲ နာမည်သာကြီးတာ… ဖိတ်စာပုံစံတွေက သိပ်ရိုးတာပဲ” ဟုသူမကညည်းငြူရင်း ပြောပါတယ်..။
“အာ… "ငယ်" ကလည်းကွာ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်…ဘာလဲစိတ်ဓာတ်ကျနေ ပြီလား? ဒီအချိန်က စိတ်ဓာတ်ကျရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူးလေ..ပျော်နေရမယ့်အချိန်ကြီးကို...” ဟု ကျွန်တော်က ပြုံးပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်…။
“အေးပါ အတူးရယ် စိတ်ဓာတ်ကြလို့မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ပူနေတာ လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရမှာစိုးလို့ပါ..” ဟု သူမက ပြန်ပြောပါတယ်..။
“ဟား..ဟား..ဒီလောက်တောင်ပဲလား ရင်တွေခုန်နေတယ်ပေါ့” လို့ကျွန်တော်နောက်လိုက်တော့ သူမက ရှက်ပြီးကွန်တော့်ကို လိုက်ရိုက်ပါတော့တယ်…။
“ဟ..ဟ မလုပ်နဲ့...အာ... ဒီအချိန်မြို့ထဲမှာ ကားဒီလောက်ရှုပ်တာ တိုက်ကုန်လို့ မင်္ဂလာမဆောင်လိုက်ရပဲနေ အုံးမယ်…ဟား..ဟား”
သူမကရှက်ရမ်းရမ်းနေပေမယ့် တော်တော်လေးကို ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်နေကြောင်းကို သူမရဲ့ မျက်နှာနဲ့ အပြုံးတွေ ကို အကောင်းဆုံး အဓိပ္ပါယ် ဖော်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်…။
“ငါလည်းပျော်ပါတယ်ဟာ….” လို့ ကျွန်တော်သူမကိုကြည့်ရင်း စိတ်ထဲကပဲ ပြောနေမိပါတယ်…။
“မနေ့ညက ငါ.. ငါ့အိပ်မက်တွေကို
နောက်နေ့မနက်မှာတော့ ငါလည်း သေဆုံးသွားခဲ့တယ်…”
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သိပ်ကိုချစ်ကြပါတယ်…...။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် အကောင်းဆုံး နားလည်ပေးနိုင်သူများ လည်းဖြစ်ပါတယ်....။ ကျွန်တော်သူမရဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ မျက်ဝန်း တွေကို အကောင်းဆုံး ဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့သလို….။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုံးစုံသော ခံစားချက်များနဲ့ ဖုံးကွယ်မှုများရဲ့ တစ်နေရာတည်းသော ဖြောင့်ချက်ပေးရာ နေရာဟာလည်း သူမရဲ့ ရှေ့မှောက်၌သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ ကျွန်တော် တစ်ခြားသူကိုသာ ဖုံးကွယ်လို့ရရင်ရမယ် သူမကိုတော့ ဘယ်လိုမှကို ဖုံးကွယ်လို့မရခဲ့တာ သူမနဲ့ ကျွန်တော် စတင်ဆုံတွေ့ ကတည်းကပါပဲ.....။ သူမနဲ့ ကျွန်တော် အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ နံနက်ခင်းတွေမှာ ပန်းပေါင်းစုံရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေဟာ တစ်လောကလုံးကို သင်းကြိုင်စေပါတယ်။ သူမနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ ညနေခင်းတွေဟာလည်း နူးညံ့အေးမြတဲ့ လေပြေလေညှင်းတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘ၀တွေတွေကိုအေးမြစေခဲ့ပါတယ်.......။ ယူကလစ်ပင်တွေ တန်းစီပြီးပေါက်နေတဲ့ အဲဒီ့လမ်းလေးမှာ သူမနဲ့အတူ လမ်းလျောက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတွေ အရမ်းကို ဘ၀င်မြင့်လေ့ရှိပါတယ်...။ ကျွန်တော်ဂစ်တာတီးတဲ့အခါ သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေမှာ သံစဉ် တွေ ပွင့်ဖူးပါတယ်…..။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကဗျာတွေတိုင်းမှာလည်း သူမဟာ စကားလုံးတွေ အဖြစ်ပါဝင်လေ့ရှိ ပါတယ်.......။ သူမရဲ့ အကြည့်တိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ အားသစ်လောင်းပါတယ်..။ ဟုတ်တယ်…။ သူမရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေ မရနိုင်တော့တဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော်သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်.............။ ကျွန်တော် ၀န်ခံပါတယ်..။ ကျွန်တော်သူမကို အရမ်းမြတ်နိုးပါတယ်။
အရာရာတိုင်းမှာ “ဒါပေမယ့်” ဆိုတာရှိတယ်”
“ငယ်… မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အစီအစဉ်တွေကတော့ အားလုံးပြီးပြီ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့..။ မင်္ဂလာဆောင် ကလည်း နောက်တစ်ပတ်မှဆိုတော့ အားလုံးအချိန်မှီတယ်..ကွက်တိပဲ” ဟု ကျွန်တော် သူကို ပြုံးပြီးပြောပြလိုက် ပါတယ်…။
“အေးဟယ်..အတူးရယ်…။ နင်လည်းတော်တော်ပင်ပန်းသွားမှာပဲနော်…။” ဟုသူမက ဂရုဏာသက်စွာ ဖြင့်ပြော ပါတယ်…။
“အာ..ငယ်ကလည်း..မဟုတ်တာ..ဒါမောစရာ ပင်ပန်းစရာလား….ဒီအချိန်ထက်ပျော်ဖို့ကောင်းတာ ဘယ်အချိန် ရှိအုံးမှာလည်း…။ နောက်ပြီး အတူးတစ်ယောက်ထဲလုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ..ငယ်လည်း ပါတာပဲကို…။ မဟုတ် ဖူးလား…?”
“ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ အတူးရယ်…ဒါပေမယ့်”
“ကဲ..ဘာမှပြောမနေနဲ့တော့ အတူးလည်းပြန်တော့မယ်..။ မနက်ဖြန်ဆို ကိုမြင့်ပြန်ရောက်မှာမလား? စောစော အိပ်တော့ သူ့ကို သွားကြိုရအုံးမှာ…။ ကိုမြင့်ကြီးကတော့ ငါ့ကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေမှာ သေချာတယ်..။ နောက်မှ ဒီလူကြီးကို ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ရမယ်…။ ဟဲ..ဟဲ။ ကဲပြန်ပြီ.. မနက်ဖြန်မှတွေ့မယ်…။ လေယာဉ် ကွင်းသွားဖို့ ငါလာကြိုမယ်”
ကျွန်တော်လည်း ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ပြန်ဖို့အတွက် ပြင်လိုက်ပါတယ်…။
“ဟင်..? ဘာလဲ..? ပြောလေ…”
“ဒီလမ်းကို ငါ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု
အခွင့်အရေးတစ်ခုအတွက် လျှောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး…
ဒီလမ်းကို လျှောက်နေရရင် ငါကိုယ်တိုင်ကိုက ပျော်နေခဲ့တာလေ….။”
ငါသိတယ်…။ မပြောနဲ့…။ ငါမျှော်လင့်သမျှ နင့်ရင်ဘတ်က ပြောမဲ့ ကာရံတွေပဲ ကြားချင်တယ်။ မပြောနဲ့ ငါ့ကို နှုတ်ခမ်းဖျားနဲ့ မပြောနဲ့…။ သေချာတယ်ဆိုရင် ငါ့မျက်လုံးကို သေသေချာချာကြည့် င့ါဘ၀ကို ထိအောင် တစ် ခါ တည်းပြော..။ ဟန်ဆောင်မှုတွေကို ငါမုန်းတယ်.....။ မျှော်လင့်ချက်တွေကို မုန်းတယ်..။ မခေါ်ပဲလာ မနှင်ပဲ ပြန်တတ်တဲ့ ဒီလောကရဲ့ နိယာမတွေကို ငါမုန်းတယ်..။ နောက်ဆုံး..။ စကားလုံးတွေကို ငါမုန်းတယ်…။ "နေ" ဆိုတာ ထွက်ပြီးရင် ပြန်ဝင်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် "နေ" ထွက်လာတာဟာ ပြန်ဝင်ဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ငါသိတယ်..။ ငါ့နောက်ကျောကိုပဲကြည့်...…။ ငါ့မျက်ဝန်းတွေကို နင်မမြင်ချင်နဲ့..။ ငါ့မျက်ဝန်းထဲမှာ ငါ့အိပ်မက်တွေ ငွေ့ရည်ဖွဲ့နေတယ်…......။ မကြာခင် ဆုံးရှုံးမှုတွေအဖြစ် ငါ့တစ်ဘ၀လုံး မစဲအောင်ရွာသွန်းကြ တော့မယ်...။ ကျောခိုင်းလိုက်တိုင်း စွန့်ခွာသွားတယ်လို့မထင်ပါနဲ့…။ ငါပျော်ရင် နင်ပျော်တယ်ဆို.............? အခုငါ.......။ နင်ရော…....? ထားလိုက်ပါလေ လူတွေ ပြောနေကြသလိုပေါ့…။ အိပ်မက်ဆိုတာ အိပ်ရာကနိုးရင် ကွယ်ပျောက်သွားတတ်တယ်လို့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့..။ တကယ်ဆို ငါကိုကမိုက်တာပါ…....။ ငါ့အိပ်မက်တွေနဲ့ ကဗျာတွေရက်ခဲ့တာကိုး….။
“ငါ့မင်္ဂလာဆောင်ကြရင်တော့ နင်လာဖြစ်အောင် လာပါနော်…”
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:43 AM 33 comments: